Izindawo zokubhuka zeMGM zengeza i-Cosmopolitan yaseLas Vegas kuphothifoliyo yayo
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba ze-Hotel & Resort » Izindawo zokubhuka zeMGM zengeza i-Cosmopolitan yaseLas Vegas kuphothifoliyo yayo
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amasiko • Ezokuzijabulisa • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Investments • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Abantu • Izindawo zokuhlala • Shopping • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
IMGM Resorts International ukuthola ukusebenza kweCosmopolitan yaseLas Vegas ukuze kubhekwe imali engu- $ 1.625 billion, ngokuya ngokulungiswa kwemali yesiko.
IMGM Resorts International imemezela ukuthengiselana ukuthola imisebenzi yeCosmopolitan yaseLas Vegas
IMGM Resorts International ingena esivumelwaneni esiqondile neBlackstone ukuthola imisebenzi yeCosmopolitan yaseLas Vegas.
Ngemuva kokuvalwa kokuthengiselana, izindawo zokungcebeleka zeMGM zizongena esivumelwaneni seminyaka engama-30 sokuqashisa, nezinketho ezintathu zokuvuselela iminyaka eyishumi.
I-MGM Resorts International namuhla imemezele ukuthi iNkampani ingene esivumelwaneni esiqondile neBlackstone ukuthola ukusebenza kwe-The Cosmopolitan yaseLas Vegas ukuze kucatshangwe imali engu- $ 1.625 billion, kuncike ekulungisweni kwezimali ngokwesiko.
Intengo yokuthenga imele ukuphindwaphindwa okucishe kube kasishiyagalombili okulungisiwe kwe-EBITDA, kufaka phakathi ukusebenzisana okulindelekile kokusebenza namathuba okukhula kwemali akhonjwa.
Ngemuva kokuvalwa kokuthengiselana, Izindawo zokudlela ze-MGM izongena esivumelwaneni seminyaka engama-30 sokuqashisa, esinezinketho ezintathu zokuvuselela iminyaka eyishumi, ngokubambisana phakathi kweStonepeak Partners, Cherng Family Trust kanye neBlackstone Real Estate Income Trust, Inc. amafa. Izindawo zokungcebeleka zeMGM zizokhokha irenti yokuqala yonyaka engama- $ 10 million, zikhuphuka minyaka yonke ngama-200% eminyakeni eyi-2 yokuqala bese kuthi ngaphezulu kube ngu-15% noma kukhuphuke i-CPI (ebekwe ku-2%) ngemuva kwalokho.
“Siyaziqhenya ngokwengeza I-Cosmopolitan, indawo yokunethezeka nekhasino eLas Vegas Strip, siye kuphothifoliyo yethu, ”kusho Izindawo zokudlela ze-MGM I-CEO noMongameli uBill Hornbuckle. “Umkhiqizo weCosmopolitan uyaziwa emhlabeni jikelele ngenxa yamakhasimende awo ahlukile kanye nomkhiqizo osezingeni eliphakeme kanye nokuhlangenwe nakho, okuwenza ulingane kahle nephothifoliyo yethu futhi kuthuthukisa umbono wethu wokuba yinkampani yezokuzijabulisa ehamba phambili emhlabeni. Silangazelele ukwamukela izivakashi nabasebenzi beCosmopolitan emndenini wamaMGM Resorts. ”
“Njengoba kufakwe imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 500 ukuze kuthuthukiswe impahla kusukela ngo-2014, I-Cosmopolitan inikeza ithuba elihle lokwandisa amakhasimende ethu futhi izonikeza ukujula okukhulu kokukhetha kwezivakashi zethu eLas Vegas, ”kusho i-MGM Resorts CFO Jonathan Halkyard. "Sikholelwa ukuthi singabusebenzisa ubuchwepheshe be-MGM Resorts, inkundla yokusebenza kanye nezinye izindlela zokusebenzisana ezingafinyeleleka kakhulu ukuze siqhubeke nokuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, ngenkathi sithuthukisa ukukhula kwempahla."
Ngaphambi kobhadane lwe-COVID-19 ezinyangeni eziyi-12 ezilandela ukuphela ngoFebhuwari 29, 2020, iCosmopolitan yakhiqiza imali engamaRandi ayizigidi ezingama-959 kanye nemali engamaRandi ayizigidi ezingama-316 ye-EBITDAR. Kwikota yesibili yaphela ngoJuni 30, 2021, impahla yakhiqiza imali engamaRandi ayizigidi ezingama-234 kanye ne- $ 92 million ye-EBITDAR elungisiwe.